फरक लुक्सका लागि इभिनिङ वाकमा विम्लेष
काठमाडौं । आफूलाई शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त राख्न तपाइँ के गर्नु हुन्छ ? मर्निङ वाकमा जानुहुन्छ वा हल्का व्याम पनि थाल्नुहुन्छ, होइन ? स्वस्थ रहन नायक विम्लेष अधिकारी भने नियमित इभिनिङ वाक गर्न थालेका छन् ।
आउँदो सिनेमामा अलग गेटअपमा देखिनुपर्ने भएकोले आजकाल नियमित इभिनिङ वाकमा जान थालेका हुन् रे, विम्लेष । उसो त उनी पहिले पनि फुर्सद हुनसाथै बेलुका टहलिन निस्कन्थे रे ।
विहानभन्दा बेलुका हिंड्न सजिलो लाग्छ, उनलाई । विहान जगिङ पोशाक, मास्क लगाएर हिंड्दा बाटोमा भेटिने फ्यानहरुसँग बोल्न समेत अफ्ठेरो हुने तर बेलुका सामान्य पोशाकमा हिंड्दा यस्ता समस्या पनि नआउने उनको तर्क छ । भन्छन्, 'कसैसँग डर हुँदैन, बेलुका ।'
उनी अहिले मीनभवदेखि कोटेश्वर महादेवस्थान हुँदै बालकुमारीको झोलुङ्गे पुलसम्म नियमित इभिनिङ वाक गर्छन् । त्यसअघि मीनभवनदेखि बबरमहलसम्मका सडक नाप्ने उनी धूलोले गर्दा नयाँ रुटतिर मोडिएका हुन् । 'बेलुुका हिंड्दा खूब आनन्द आउँछ,' उनले भने ।
विम्लेष आफ्नो आउँदो सिनेमामा आफ्नो गेटअपलाई पूरै परिवर्तन गर्ने भएका छन् । हेयर स्टाइल, हिंड्ने, दौडिने शैली र बडी ल्याङ्ग्वेजमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । सिनेमाको नाम भने उनले साइन्ग नभएको भन्दै खुलाउन चाहेनन् ।